I-Casa del Cielo, i-Spectacular Retreat - I-Airbnb
I-Casa del Cielo, i-Spectacular Retreat
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguLiz
Xa iyi-461 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Uyakonwabela igumbi elithandekayo elinomnyango walo wabucala, igumbi lokuhlambela kunye nesauna. Idityaniswe nedekhi enebhafu eshushu kunye nefenitshala yepatio ebonisa umbono omangalisayo weentaba zeTopa Topa kunye nendawo entle yokujonga "umzuzu opinki" ka-Ojai. *
Ikhatywe ziinduli zeOjai Valley, iCasa del Cielo yindawo epholileyo egcwele izinto ezimangalisayo ezifihlakeleyo.
Imihlaba ebanzi ibonelela ngeendlela ezininzi zokuchukumisa iinoveli. Indlela eya kwigumbi lakho idlula ngaphantsi kwe-archway ye-wisteria yendalo njengoko ikhokelela kwidekhi edibeneyo ye-redwood, indawo entle yokujonga imbonakalo yegadi yezityalo zemveli kunye neenduli ezimangalisayo ezingaphaya.
Ukusuka kumngangatho, amanyathelo ambalwa akuthatha ukutyhutyha isitiya serozi, emva koko siye kwigadi enkulu yemveli enepatio yayo.
Qhubekeka udlulele kwiarbor embindini wegadi uhla ngendlela emfutshane, kwaye ungena kwindawo yokurhoxa engaphandle efana neZen, uwolelwe ziinduli kwaye ukhuselwe ngoqalo olude kunye nohlaza oluchumileyo. Ukuthontsiza okuvayo ngumsinga, ophuma kwingxangxasi ekwiGadi yaseJapan ukuya ngasekunene kwakho.
Wela enye yezi bhulorho zimbini zohlobo lwaseAsia kwaye ulandele umsinga ukuya kwichibi elikhulu lenyibiba. Kwikona ejongene nechibi, i-gazebo ye-redwood ibekwe kumda we-canyon enzulu. Ibonelela ngenye indawo efanelekileyo yokonwabela umbono omangalisayo weeNtaba zeTopa Topa kunye ne "Pink Moment" yasentsomini. *
*Imi phakathi kodederhu lweentaba ezinqabileyo empuma-ntshona, iNtili yeOjai yenye yeendawo ezimbalwa emhlabeni ukuze ufumane "umzuzu oPinki" njengoko ilanga litshona. Kangangemizuzu eliqela, ukukhanya kwelanga elithozamisayo kudala izithunzi eziqaqambileyo zepinki kunye nelavenda kwiTopa Topa bluffs, ngaphezulu kwe-6,000 yeemitha ngaphezu komphakamo wolwandle kwimpuma yentlambo.
I-wifi ekhawulezayo – i-461 Mbps
4.96 · Izimvo eziyi-404
Ukongeza kwimibono emangalisayo, ubumelwane bethu bubandakanya uthungelwano olubanzi lokunyuka intaba kunye neendlela zokukhwela amahashe.
Sikwiikhilomitha ezintlanu kuphela ukusuka kwiDolophana yaseOjai, apho uya kufumana uluhlu olubanzi lweevenkile, iindawo zokutyela, iigalari zobugcisa, amathuba okungcamla iwayini kunye neendawo zokuzonwabisa.
Ibekwe kumgama omfutshane kude ne-Scenic Creek Road, i-Ojai Valley Inn yeenkwenkwezi ezintlanu kunye ne-Spa ibonisa iindawo zokutyela ezininzi ezikumgangatho wehlabathi kunye nezinye izinto eziluncedo.
Siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zethu, kodwa sihlala kwindawo kwaye sifumaneka ngokulula ukukunceda ngayo nayiphi na indlela esinokuyenza ngayo.
Siyavuya ukubonelela ngolwazi malunga neendawo zomdla zasekhaya, iindawo zokutyela, iindlela zokuhamba intaba, imisebenzi yolonwabo, njl.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oak View